Igba Iron nfuli Nsukka - China igba ígwè nfuli Suppliers & Factory
igba ígwè nfuli
Nkedo Iron Aka nfuli Ugbu a, ọtụtụ n'ime ntuziaka nfuli ịmụta abụọ plunger imewe, na ala nsogbu mmepụta na elu nsogbu mmepụta, ma mgbe mgbali mgbapụta bụ na elu nsogbu mmepụta, eruba dị oke obere na-arụ ọrụ arụmọrụ bụ ala. Na-ewere aka mgbapụta dị ka ihe atụ, akụkụ ndị a kapịrị ọnụ dị ka ndị a: akara akara (nrụgide dị elu) 63 MPa; gosiri mmepụta eruba 1.5 ml / oge; nrụgide nrụpụta obere nrụpụta nrụpụta 5-10 MPa; obere nrụgide usoro ntụgharị nke 12 ml / oge; haịdrọlik mmanụ tank ...
Nkedo Iron Aka nfuli
Igba Iron Ogige nfuli
Igba Iron Garden nfuli Ngwa 1. Ike isi nke threaded fastener na tightening ngwaọrụ. Nrụgide ọrụ nke mmanụ hydraulic nwere ike iru 300mpa. Ka ọ dị ugbu a, kol na China, ike eletriki, ụlọ ọrụ kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji ike hydraulic dị elu ma ọ bụ ihe eji eme akwa, na-enwe nnukwu mgbali ntụ ntụ abalị chọrọ mgbapụta dị ka isi iyi ike, nke rụpụtara ezigbo nsonaazụ. 2. Mechanical ngwá ezigbo cone ma ọ bụ cylindrical elu nnyonye anya dabara disassembly p ...
igba ígwè ogige nfuli
igba ígwè ogige nfuli Ngwa 1. Ike isi iyi nke threaded fastener na tightening ngwaọrụ. Nrụgide ọrụ nke mmanụ hydraulic nwere ike iru 300mpa. Ka ọ dị ugbu a, kol na China, ike eletriki, ụlọ ọrụ kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji ike hydraulic dị elu ma ọ bụ ihe eji eme akwa, na-enwe nnukwu mgbali ntụ ntụ abalị chọrọ mgbapụta dị ka isi iyi ike, nke rụpụtara ezigbo nsonaazụ. 2. Mechanical ngwá ezigbo cone ma ọ bụ cylindrical elu nnyonye anya dabara disassem ...
Nkedo Iron Hand nfuli Manual haịdrọlik mmanụ mgbapụta bụ ụdị obere elu nsogbu mmanụ mgbapụta nke nwere ike tọghata ntuziaka n'ibu ume n'ime haịdrọlik ume. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche dị ka ibuli, gbagọọ, na-agbatị, na-akpacha ajị, na-agbanye, na-agbakọta, na-agbasasị na ụfọdụ ihe owuwu ụlọ na iwu ndị agha, wdg. iji rụọ ọrụ, ọtụtụ ngwa. Ọrụ ugboro abụọ, aut ...